कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण शुक्रबारदेखि, समायोजन नटुंगिएका जिल्लामा वितरण रोकिने
लिलु डुम्रे बिहीबार, फागुन १५, २०७६, १६:३७
काठमाडौं- पूर्व निर्धारित समयतालिकाअनुसार बिहीबारसम्म सकिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको पार्टी संरचना गठन नटुंगिने भएको छ। निर्वाचन समितिलाई दिइएको समय सीमा बिहीबार सकिए पनि सोअनुसार काम भने सम्पन्न नभएको हो। तेश्रोपटक बढाइएको समयसीमामा ५२ जिल्लामा पूर्ण रुपमा पार्टी संरचना बनेको छ।
बाँकी जिल्लामा भने पार्टी निर्वाचन समितिले काम निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन। निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीका अनुसार जिल्ला सभापतिहरू सक्रिय नभएकाले पार्टीका संरचना गठनमा ढिलाइ भएको हो। ‘जिल्ला सभापतिहरुको सक्रियतामा कमी भएकाले तोकिएको समयमा समायोजनको कार्य सकिएन,’ अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
संघीय निर्वाचनका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संरचना गठनको कार्य यसअघि नै सकिएको छ। ७ सय ५३ पालिकाहरू र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा निर्वाचन समितिलाई बिहीबारसम्म संरचना गठनको समयावधि दिइएको थियो।
माघ २९ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका बनाएको थियो। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सक्ने समयावधि चैत मसान्तसम्म तोकिएको छ।
पूर्ण रूपमा समायोजन नसक्ने जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यताको वितरण रोकिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। ‘जति जिल्लाबाट पूर्ण रुपमा सकिएर नामावली आएको छ। ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु शुक्रबारबाट हुन्छ। समायोजन नसक्ने जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता फर्म पाउँदैनन्,’ अधिकारीले भने।
पार्टी केन्द्रले पारित गरी पठाएको निर्देशिका लागू नगरी बनेको संरचनालाई अस्वीकृत गरिएको निर्वाचन समितिले प्रष्ट पारेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयन नभई बनेका संरचनामा क्रियाशील सदस्यता वितरण क्रममा विवाद उत्पन्न हुने भएकाले जिल्ला सभापतिहरुलाई सचेत बनाएको निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी गराए। २५ जिल्लाबाट आंशिक रूपमा नामावली पठाइएको घिमिरेको भनाइ छ। जिल्ला कार्यसमितिले पार्टी सदस्यहरूको नामको अभिलेखमा नभएकाले समायोजन विलम्ब हुँदै गएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत तल्लो तहको विगतको कार्यसमितिलाई समायोजन गरी महाधिवेशनमा जाने पार्टीले निर्णय गरेको थियो। संघीय संरचनाअनुरुप पार्टी कार्यसमिति बनाउन गत साउनमा राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिमा गोपालकृष्ण घिमिरे, खम्मबहादुर खाती, सीताराम केसी, टेकराज पौडेल सदस्य छन्।
समायोजन प्रक्रिया ढिलो हुँदै गए महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने बताए। ‘सबै स्थानीय तहमा समायोजन सकेका जिल्लाहरुको क्रियाशील वितरण सुरु तत्काल हुन्छ। समायोजन गर्न नसक्नेहरूका लागि पनि क्रियाशील वितरणको समयावधि प्रर्याप्त छुट्याएका छौं,' उनले भने, 'समायोजन सक्ने जिल्लाले क्रियाशील वितरणको समय बढी पाउँछ। ढिलो गर्नेलाई क्रियाशील वितरणको समय घट्दै जान्छ।’
कांग्रेसको महाधिवेशनको नियमित कार्यकाल २०७७ फागुन २३ पछि सकिँदैछ। संघीय संरचना गठनमा भएको ढिलाईलाई विषम परिस्थिति देखाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यसमितिको अवधि एक वर्ष थपिएको छ। विषम परिस्थितिका कारण समायावधि एक वर्ष थप्न सकिने विधानमा व्यवस्था छ। थपिएको एक वर्षमा महाधिवेशन हुन नसके ६ महिना पुनः थप्न सकिने व्यवस्था छ।
किन हटाइयो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट?
कालापानी लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
वीरगञ्जमा संक्रमित बढ्दै गएपछि क्वारेन्टाइन बन्यो ‘अस्थायी आइसोलेसन’
नेपाली भूभागको पक्षमा केन्द्रीय समितिले संस्थागत निर्णय गर्छ : कांग्रेस नेपाली कांग्रेसले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले स्वाभिमानका पक्षमा उभिने बताए। ‘जमिनको पक्षमा... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
थप १५६ जनामा कोरोना संक्रमण, १०४२ पुगे संक्रमित थप १५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवको... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
संविधान संशोधन: जसपाको एजेन्डामा प्रवेश गर्लान् त राजनीतिक दल? नेपाली कांग्रेस पनि मधेसका मागहरु सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो। तर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओल... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
कान्ति राजपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन बिहीबार, जेठ १५, २०७७
विद्युत नपुगेका ९७ स्थानीय तहमा सौर्य ग्रिड निर्माण गरिने बिहीबार, जेठ १५, २०७७
आउँदो वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट बिहीबार, जेठ १५, २०७७
सांसद् विकास कोषको रकम कटौती बिहीबार, जेठ १५, २०७७